.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: လင်းလင်း - သံမဏိလိပ်ပြာ Album
လင်းလင်း - သံမဏိလိပ်ပြာ Album
လင်းလင်းရဲ့ သံမဏိလိပ်ပြာ Album ထဲက သံမဏိလိပ်ပြာ နဲ့ အချစ်ရဲ့ ရလဒ် သီချင်းတွေကတော့
လူကြိုက်အများဆုံးပါပဲ။ အောက်မှာ နားထောင်ကြည့်ပြီးတော့ ကြိုက်တဲ့ သီချင်းကို ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
1 မော်ဒန်ကဗျာ Click Here !! 1.90 MB
2 ရင်ထဲကဂီတ Click Here !! 1.90 MB
3 အချစ်ရဲ့ရလဒ် Click Here !! 1.50 MB
4 အိပ်မက်ထဲက စစ်သားကြီး Click Here !! 3.00 MB
5 အချစ်သီချင်းတစ်ပုဒ် Click Here !! 1.70 MB
6 ရောင်နီ Click Here !! 1.70 MB
7 သံမဏိလိပ်ပြာ Click Here !! 2.70 MB
8 ရင်ကွဲနာ Click Here !! 2.10 MB
9 လူငယ်တမ်းချင်း Click Here !! 1.70 MB
10 တန်ဖိုးများနဲ့လူ Click Here !! 1.80 MB
11 Bonus Track Click Here !! 1.80 MB
12 Death Of Mandalay ( Piano Only ) Click Here !! 1.90 MB
ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာ တင်ထားတဲ့ Mp3 သီချင်းဒေါင်းလုပ်လင့်တွေကို တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ (လုံးဝ) ကူးတင်ခွင့် မပြုပါ။
Posted by Thurainlin at 04:02